ဒဏ်ရာရဘောလုံးသမားတွေအတွက် လူနာတင်ကားတစ်စီးတောင်မစီစဉ်ပေးနှိင်တဲ့ ဦးဇော်ဇော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဒဏ်ရာရဘောလုံးသမားတွေအတွက် လူနာတင်ကားတစ်စီးတောင်မစီစဉ်ပေးနှိင်တဲ့ ဦးဇော်ဇော်
ဒဏ်ရာရဘောလုံးသမားတွေအတွက် လူနာတင်ကားတစ်စီးတောင်မစီစဉ်ပေးနှိင်တဲ့ ဦးဇော်ဇော်
Posted by မွသဲ ( 17082011 ) on Feb 21, 2012 in News | 11 comments
အလှုအတန်းရက်ရောတဲ့ ဦးဇော်ဇော်၊ ပိုက်ဆံတွေ အုပ်လိုက်ဝေတဲ့ဦးဇော်ဇော်၊ မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဥက္ကဋ္ဌဦးဇော်ဇော်။ ဒီလိုဂုဏ်ပုဒ်တွေပြည့်စုံတဲ့သူဟာ ဒဏ်ရာရနေ တဲ့ ဘောလုံးသမားတွေအတွက် လူနာတင်ကားတစ်စီးတောင်မစီစဉ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ မောရ၀တီနှင့် ကမ္ဘောဇ အသင်းတို့၏ ပဒုမ္မာကွင်း ပွဲစဉ် ဒုတိယပိုင်းတွင် မောရ၀တီ ကစားသမား အောင်ဌေးဦးသည် ဒူးဒဏ်ရာ ပြင်းထန်စွာ ရရှိခဲ့ရာ ဆေးရုံကား မရှိခဲ့၍ ၁၅မိနစ်ကြာခန့် စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရကာ အဆုံးတွင် ကြုံသလို ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင် ခဲ့ရသည် ဟု သိရသည်။ ကမ္ဘောဇ အသင်းက ၆ – ၂ ဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့သည့်အဆိုပါပွဲစဉ်တွင် ဒုတိယပိုင်းပွဲချိန် ၆၃ မိနစ်ခန့် တွင် မောရ၀တီ ကစားသမား အောင်ဌေးဦး သည်ဘောလုံး ယှဉ်လုရင်း ဒူးတွင်ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်စွာ ရရှိခဲ့သည်။ အောင်ဌေးဦး ကို ထူးကျော်နှင့် လူစားလဲပြီး ဆေးအဖွဲ့မှ ဒဏ်ရာပြင်းထန်သည်ဟုယူဆ ကာ ဆေးရုံ သို့ပို့ဆောင်စေရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ပဒုမ္မာကွင်း အတွင်းဆေးရုံကားအဆင်သင့်ရှိမနေသောကြောင့် ၁၅ မိနစ်ခန့်စောင့်ဆိုင်းပြီးမှ အဆုံးတွင်အခြားကားနှင့် ကြုံသလိုဆေးရုံသို့ပို့ ဆောင်ပေးခဲ့ရသည်။
ထိုဖြစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့သူ ပွဲကြည်ပရိတ်သတ်များအကြား ဝေဖန်သံများထွက်ပေါ်လာခဲ့ကာ အားကစားမီဒီယာကလဲ “ ဆေးရုံကား မရှိဘူးဆို ရင်တောင်မှပဲ ဒဏ်ရာပြင်းထန်ရင် ဘယ်ဆေးရုံကိုဘယ်လိုပို့မယ်ဆိုတာ ကြိုစီစဉ်ထားသင့်တယ်။ အခုတော့ ကစားသမားက ဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန် ရနေတာတောင် ဘာကိုဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိ၊ ဆေးရုံကားလဲမရှိနဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ ထိခိုက်မှု့မျိုးဖြစ်နေရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ” ဟုဖွင့်ပြောခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်စက်တင်ဘာလ ကလည်းအောင်ဆန်းကွင်းတွင် ကစားခဲ့သည့် အာဆီယံလူငယ်ပြိုင်ပွဲ ပွဲစဉ်တခုတွင် ထိုင်းကစားသမားတစ်ဦးသတိလစ် သွားခဲ့ရာ ကွင်းအ တွင်း ဆေးရုံကားရှိသော်လည်း ၀င်းတံခါးသော့ခတ်ထားသောကြောင့် ၅ မိနစ်ကြာခန့်စောင့်ဆိုင်းပြီးမှ ကွင်းအတွင်းမှထွက်ခွာခွင့်ရခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်လည်း ဒဏ်ရာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရရှိသည့် ကစားသမား များအတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှု အားနည်းချက်များ ရှိနေခြင်း အပေါ် ယခုကဲ့သို့ ဝေဖန်သံများ ထွက်ပေါ် ခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
မီးသတ်ကား လှုတာတို့ လူနာတင်ယာဉ် လှုတာတို့ သတင်းစာထဲတော့ တွေ့ဖူးပါတယ် … ဘယ်ရောက်နေလဲတော့ သိဘူး …
KTV မှာ လှူထားတာထင်တယ်။
မမတွေအကဲလွန်ပြီး သတိလစ်ရင် အဆင်ပြေအောင်လို့။
ပြောတော့မယ် မှန်တာတွေကို …လူဆိုး
ပိုက်ပိုက်တွေက ဘောလုံးသမားတွေတွက်ဟုတ်ဘူးလေ။မယ်လိုဒီတို့ ဂျင်းနီတို့ ဂျင်းပြာတို့ အတွက်…
ဟွင်း. ငတ်လို့ ဘောလုံးကန်စားနေသလိုဖြစ်နေပီ။ဟန်ပြဘောလုံးလိဂ်လို့ ယူဆမိပါကြောင်း…
ဒီနေ့ဘဲ အော်ဇီ ကစားသမား ဒဏ်ရာရလို့ စာချုပ်ဖျက်ရပြီး
မြန်မာကစားသမားတယောက် ကျိုးလို့ ရာသီကုန်သွားတယ် ဖတ်လိုက်ရသေး..။
ငှက်ကဌခမျာ မလဲ ခုတလော ကံနိမ့်တယ်ထင့် ….
၁၀၀ဖိုး ၃ယောက် လေးတွေနဲ့ ကာကာ ဆိုနေတဲ့ပုံ တက်လားတက်ရဲ့…
တရားဟောပွဲ ပိတ်တယ်ထင်လို့ ၀ိုင်းကလော်ခံထိလား ထိရဲ့ ….
၆လလောက် ဘာပွဲမှ မကစားတဲ့အသင်း အဆင့်ကျသွားလို့
စိတ်ထိခယက်သွားလို့ … ဒီ၁ပုဒ်မှာတော့ဖြင့်.. ငှက်ကထ
ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးခေါ်မထီ ဆိုတာ ငှက်ကထ ၁ကောင်တည်းနားတဲ့ ကိုင်း
၂ဖက်အသင်းကလည်း ဖိုတိစီတာ အိပ်စပရက်စ်ကြီး ဒွေဘဲ စီးနေပြီး
အရေးဟယ် အကြောင်းဟယ် လက်တိုလက်တောင်း သုံးဖို့ ကွန်မျူတာလေး
၆စီတာ တူ တွဲလ်စီတာ လေးတစင်းစီတောင် ပါမလာတော့ ရုပ်ပျက်တာပေါ့ …။
ဘောလုံးသမား ခညာ ကြုံရာ အမိုးမပါတဲ့ ဟိုက်အေ့ နောက်ခန်းမှာ ပက်လက်လိုက်
ရတဲ့ပုံ ကြည့်ရတာ ရင်ထဲ မချိလို့ပါ….။
ဝေဖန်စရာတွေ ရှိလင့်ကစား လုပ်တော့ လုပ်ပေးနေသူမို့ သများ တို့ ငှက်ကထ ဂျီးဟာ
သများ မီးဒုတ်ရှို့တဲ့ ဘွဲ့ဝယ်ထားတဲ့ ဟိုလူဝဂျီးထက်တော့ အပုံဂျီးသာတဲ့လူပါချင့်
ဒီဟာက နည်းနည်း တစ်ဖက်သတ် ဦးဇော်ဇော်ကိုပြောချင်တဲ့ပုံပေါက်နေတယ်။
Soccer Myanmar က ကူးယူထားသလားဗျ?? ဦးဇော်ဇော် လူနာတင်ကား လေးတောင်မစီစဉ်ပေးနိုင်ဘူးဆို ဒီပြသနာတက်လာတာ ၃ ခါရှိသေးတယ် MNL က လေးနှစ်ရှိတော့မယ်။ ဘာလို့ ခုမှ ဒီပြသနာတက်လာတာလဲ?? ၊ ဦးသန်းရွှေကိုဖားဖား ၊ ဦးသန်းရွှေမြေးကိုပဲဖားဖားဗျာ ၊ ဦးဇော်ဇော်ကြောင့် Myanmar National League ဆိုတာ ပေါ်လာခဲ့တာမလား။ ဦးဇော်ဇော်ကျေးဇူးတွေ မြန်မာဘောလုံးကစားသမားတွေ ပေါ်မှာ မြန်မာပွဲကြည့်ချင်တဲ့ မြန်မာပရိတ်သတ်တွေ အပေါ်မှာရှိတယ်။နောက် သူ အိုမန်နဲ့ပွဲမှာ ဖြစ်တဲ့ပြသနာကြောင့် အပိတ်ခံရတယ် မြန်မာအသင်းပြန်ကစားရအောင် ကြိုးစားပေးတာ၊ ဒီ MNL မလုပ်ခင် လဲ နိုင်ငံခြားသွားပြီး သူ လ နဲ့ချီ လေ့လာ ၊ အစည်းအဝေးတွေတက်ခဲ့တယ်။ ဒါတွေကိုမစဉ်းစားပဲ “ဒဏ်ရာရဘောလုံးသမားအတွက် လူနာကားတစ်စီးတောင် မစီစဉ်ပေးနိုင်ဘူး” ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တပ်ဖဲ့လို့မရဘူးလို့ထင်တယ်။ ပြီးတော့ Soccer Myanmar က ကူးခဲ့တာဆို ဒီဟာကိုပဲ ဆက်ကူးပါ။ ထိုကဲ့သို့ ကစားသမားများ ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ရန် အခက်အခဲ ကြုံနေရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မော်ရ၀တီ အုပ်ချုပ်သူ ဦးငြိမ်းဝင်းအောင်က “သူ့ (ဥက္ကဋ္ဌ) အနေနဲ့ ကိုယ့်အိတ်ထဲက ပိုက်ဆံနဲ့စိုက်ပြီး လုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာ အခုလို ဆေးရုံကားကိစ္စကအစ အသေးအမွှားတွေကို လိုက်ပြီး မတင်ပြလိုပါဘူး။ ဥက္ကဋ္ဌ စိတ်ညစ်သွားမှာ စိုးတယ်။ ဒါကြောင့် အသင်းအနေနဲ့ အဆင်ပြေအောင် လုပ်လိုက်ပါတယ်” ဟု ဆိုခဲ့သည်။ ထိုစကားနှင့် ပတ်သက်၍ မီဒီယာတစ်ဦးက ကစားသမား ဒဏ်ရာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရရှိခြင်းအပေါ် အသေးအမွှား ကိစ္စဟု မြင်ပါသလားဟု မေးမြန်းခဲ့ရာ ဦးငြိမ်းဝင်းအောင်က “ကစားသမား ဒဏ်ရာရမှုဟာ အရမ်းကို အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒါဟာ ကစားသမား ဘ၀ကိုပါ ထိခိုက် နိုင်တာမျိုးပါ” ဟု ပြန်လည် ဖြေရှင်းခဲ့သည်။
ခပ်ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဥကဌဟာ ပွဲတစ်ပွဲစဉ်အထိကို လိုက်ပြီးကြီးကျပ်စရာမလိုဘူးလို့ထင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီဆိုတာရှိတယ်လေ။ သူတို့အနေနဲ့ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲမှာ ဘာလိုတယ် ဘာလိုတယ်ဆိုတာ သူတို့သိရမယ်။
Soccer Myanmar ကိုမသိပါ။ မဖတ်ဖူးပါ။
ဒါဆိုဆောရီး။ ဆက်ပြောချင်တာ ခုနက ဖတ်လိုက်ရတဲ့ အဲ့ website မှာတင်ထားတာအရဆို ဦးဇော်ဇော်ဟာ FIFA ကပေးတဲ့ ထောက်ပံ့စရိတ် ဒေါ်လာ2သိန်း ၂ သောင်းခွဲကို စီးပွာရေးပိတ်ဆို့မှုကြောင့် မရပဲ တစ်နှစ်ကုန်ကျစရိတ်၂ သန်းမှာ အများစုက သူ့အိတ်ထဲက စိုက်ထုတ်ထားရတယ်။ အဲ့ဒါ နှစ်နှစ်ရှိပြီလို့သိရတယ် ။ဒါမျိုးအခြေအနေမှာ ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာဟာ မပြော ပ လောက်သေးဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ သူ လဲ သိမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ချက်ချင်းကြီးလုပ်ဖို့ဆိုတာ အဆင်မပြောတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။